Orinasa iray ho an'ny famokarana sakafo mangatsiaka dia aorina ao amin'ny Adygea - gazetiboky "Potato System".
в vaovao, fanodinana, Vaovao momba ny faritra, Tekinika / teknolojia
Ny Alliance LLC dia hampiasa vola 1 lavitrisa roubles amin'ny fananganana orinasa famokarana voankazo sy legioma mangatsiaka ao amin'ny distrikan'i Takhtamukaysky. Hanala ny olan’ny fivarotana vokatra vokarin’ny tantsaha ity ozinina fanodinana vaovao ity.
Ny dingana voalohany amin'ny tetikasa, mitentina 650 tapitrisa roubles, dia efa nampiharina. Nanangana trano famokarana ny Alliance, nanome azy ireo fifandraisana ary nividy fitaovana. Ny fahafaha-mamokatra ny orinasa dia manodidina ny 14 arivo taonina ny vokatra vita isan-taona. Asa 145 no noforonina.
Ny dingana faharoa amin'ny tetikasa dia kasaina hatao amin'ny fe-potoana manomboka amin'ny Jona 2022 ka hatramin'ny Martsa 2023. Ny vola lany amin'ireo tanjona ireo dia hahatratra 350 tapitrisa roubles. Vokatr'izany, ny fahafahan'ny orinasa dia hitombo ho 25 arivo taonina vokatra vita isan-taona.
Tags: AdygeaOzinina fanodinana legiomalegioma mangatsiaka
Aprily tamin'ny tsenan'ny ovy sy karaoty dia nanomboka fiakaran'ny vidiny - famerenana ny tsena ho an'ny 14 herinandro 2019.